HOR DHAC: Spain Vs. Turkey – Gool FM
HOR DHAC: Spain Vs. Turkey
(Nice) 17 Juunyo 2016. Spain oo hanatay tartankan labadii ugu dambeeysay waxa ay xaqiijin doontaa gaarida wareega 16-ka hadii ay ka badiso Turkey.
Dhinaca kale, Turkey oo guul daro ku furtay ololahan (Crotia ayaa 1-0 uga badisay), waxa ay isha ku hayaan nooleeynta rajada ay ka leeyihiin Euro 2016.
Spain waxa ay gool iyo waxba uga soo badisay Czech Republic, gool xilli dambe yimi ayey ka heshay Gerard Pique.
– Vicente Del Bosque wax dhaawac ah oo cusub ma wal wal galinayaan kahor is araggooda Turkey, waxa ay is badal ku sameyn karaan duulaanka.
– Nolito aad ayuu u bandhig hooseeyey kulankii Czech Republic, taas waxa ay ka dhigan tahay in Pedro uu soo gali doono safka kowaad gaar ahaan waaxda garbaha, laakiin Alvaro Morata ayaa la filayaa in uu weerarka dhexe fursad kale u helo.
-Is badal intaa ka badan lama raajicinayo.
– Gokhan Gonul and Mehmet Topal labadaba shaki ayaa laga galinayaa kulanka Spain waxaana boosaskooda buuxin kara Semih Kaya iyo Sener Ozbayrakli.
– Ozan Tufan isaga waxa uu u dhici karaa keydka kaddib su’aalo laga keenay daafac xumadiisii goolkii uu Luka Modric ka dhaliyey Turkey ee guul darada biday.
– Burak Yilmaz iyo da’yare Emre Mor wey ku soo bilaaban karaa ciyaarta.
-Turkey hal mar oo kaliya ayey guul ka heleen Spain 10 jeer oo ay kulmeen (Afar bar bar dhac iyo shan guul daro). Halka mar ee ay ka badiyeen Spain waxa ay ahayd ciyaar ay 1-0 ku garaaceen Istanbul bishii Maarso 1954 oo ahayd kulan is reeb reebka koobka aduunka.
-Spain hal gool oo qura ayey u ogolaatay in ay ka dhaliso Turkey lixdii is arag ee ugu dambeeysay, goolkaas waxa uu yimi ciyaar ay La Roja 2009 ku badisay 2-1.
-Kulankan waxa uu noqonayaa markii ugu horeeysay ee ay Spain la dheesho Turkey tartan weyn.
-Spain waxa ay ku guuleysteen Euro-ga labadii jeer ee ugu dambeeysay (2008, 2012) waana markii ugu horeeysay tartanka. Sidoo kale waxa ay fiinaalaha gaareen (1984), waxaana 2-0 uga qaaday martigaliyeyaashii France.
-Spain gool kama dhalan lixdii boqol (600) ee daqiiqo ugu dambeeysay tartanka Euro waana rikoor u yaal koobka qaramada qaarada Yurub.
-Turkey waxa ay badiyeen saddex kaliya 13-kii kulan ee ay Euro-ga ciyaareen (2 bar bar dhac iyo 8 guul daro). Sidoo kale saddex jeer oo kaliya ay shabaqooda ilaashadeen 13-ka kulan.
Hadii ay kaarka huruudiga ah qaataan waxa ay ganaax uga maqnaan doonaan kulanka xiga: Hakan Balta, Volkan Şen, Cenk Tosun
Gegida: Stade de Nice
HOR DHAC: Italy Vs. Sweden